Uzenza njani ii-Emoticons kwi-Twitch: Iindlela ezahlukeneyo zokwenza ii-Emoticons | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 03/05/2022 15:30 | Iimpawu, Izibonelelo
Ihlabathi letekhnoloji lihluke kangangokuba ngoku sinokukhetha iindlela ezahlukeneyo. Kule post, siza kuthetha ngesixhobo okanye isicelo esisefashonini kakhulu phakathi kwabo bonke abo bazinikele ekusasazeni okanye eyaziwa ngokuba ziividiyo ezibukhoma kunye nenketho yokuncokola.
Ngokuqinisekileyo sele uvile ngayo okanye hayi, kodwa ayinakho kuphela ukwenza iividiyo ezibukhoma kwi-intanethi, kodwa iphinde idlulele ngaphaya koko besicinga.
Ngoko ke, Siye sayila uhlobo lwesifundo esifutshane apho siya kuchaza indlela yokwenza ii-emoticons okanye i-emojis eyaziwayo, ukwenza incoko okanye iividiyo zakho, indlela ephilileyo nesebenzayo.
Asifuni kukwenza ukuba ulinde kwakhona, siyaqala.
1 Twitch: yintoni
2 Isifundo: Uyenza njani i-emojis kwiTwitch
2.1 Inyathelo 1: Yenza ifayile
2.2 Inyathelo 2: Qalisa ukuzoba
2.3 Inyathelo 3: Zisa i-emoji yakho ebomini kunye nombala
2.4 Inyathelo lesi-4: Yenza uchuku lokugqibela
2.5 Inyathelo 5: Thumela i-emoji yakho
2.6 Icandelo 6: Yifake kwiTwitch
Umthombo: 65 nangaphezulu
Kwabo bangekayazi ukuba eli qonga limalunga nantoni okanye lisebenza njani, musani ukuba nexhala kuba siyile ingcaciso emfutshane ukuze ungafuni ukwazi ukuba yintoni na kwaye unokuthi kamva ukwazi ukuyila i-emojis.
I-Twitch ichazwa njenge elona qonga libalulekileyo lokusasaza okanye ividiyo ephilayo ukuza kuthi ga ngoku. Masithi iyilwe ngenjongo yokwenza iividiyo ezibukhoma okanye ukusasaza imidlalo ethile yevidiyo. Ngesi sizathu, isetyenziswa ngokubanzi ngabaninzi be-youtubers abanamajelo apho badlala khona kwaye benze olu hlobo lwevidiyo.
Asinalo kuphela uhlobo olulodwa lwabaphulaphuli, kuba iinkampani ezininzi okanye amaziko asebenzisa eli qonga ukusasaza iividiyo zabo kwaye ngale ndlela, wonke umntu uyazazi iindaba zakho. Sithetha ngabantu abadumileyo (amagcisa, iimvumi, abadlali bebhola ekhatywayo, njl.njl.)
Kwanamaqela amaninzi ebhola ekhatywayo e-NBA okanye e-basketball nawo ajoyine impumelelo ye-Twitch, etsale ingqwalasela enkulu kubasebenzisi.
Okwangoku, eli qonga lidumileyo, ifumana iindwendwe ezizigidi ezili-17,5 ngosuku kwaye inabaphulaphuli abazizigidi kunye nezigidi zeendwendwe.
Yintoni abantu abambalwa abayaziyo kukuba eli qonga lathengwa yi-Amazon ngo-2014 kwaye ngenxa yeso sizathu, sisizathu esihle sokuba ifakwe kakhulu kwi-Amazon prime subscription package. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezo zicelo ukuba kukhula ngokuhamba kwexesha ukuya kwizikali ezinkuluUkongeza, ngokunikezela ngomxholo okhethekileyo kunye nowodwa, kuyenza ikhetheke ngakumbi kwabanye, kwaye yiloo nto ababukeli bayo bayithanda kakhulu.
Ujongano lweTwitch inokufana kakhulu neYouTube, ngakumbi kuba ibandakanya ukhetho lokuncokola ngelixa uphila. Ukongeza, unokundwendwela ngokuthe ngqo kwabo basebenzisi ubalandelayo, iinkcukacha ezithetha ukuba awuphoswa naziphi na iindaba zabo.
Njengoko zikwangamajelo, unokukhetha ukurhuma kwezona zininzi zitsalela ingqalelo yakho kwaye kwangoko, iqonga libeka iividiyo zalo kwindawo ephambili yeqonga ukuze ube nazo.
Ngamafutshane, indlela entsha yokonwabisa.
Isifundo: Uyenza njani i-emojis kwiTwitch
Umthombo: Twitch Blog
Kule khokelo, Siza kusebenzisa isixhobo sokupeyinta isitudiyo sekliphu. Yindlela elungileyo yokuzoba kunye nokwenza ii-vectors kunye nemifanekiso ngokukhawuleza nangokulula. Ngale ndlela sinokuzithumela ngaphandle kamva kwi-PNG okanye kuyo nayiphi na enye ifomathi esebenzayo.
Nje ukuba isixhobo sikhutshelwe kwaye sifakwe kwisixhobo sakho, siqhubela phambili kwinyathelo lokuqala lokuqalisa isifundo.
Inyathelo 1: Yenza ifayile
Umthombo: Iingcebiso zeSitudiyo seClip
Into yokuqala esiza kuyenza kukudala ifayile entsha. Ukwenza oku, kulula kakhulu, kufuneka nje cofa i icon ngohlobo lwephepha okanye iphepha esinayo kwibar ephezulu, ngasekhohlo nje.
Nje ukuba sicinezele i-icon, kufuneka siqiniseke ngemilinganiselo echanekileyo, apho siza kusebenza khona kwaye sibonise umzobo wethu. Ngale ndlela, into echanekileyo iya kuba yeyokuba ifayile ibe nembonakalo yesikweri okanye imilo, apho kuphela i-emoji inokusebenza.
Nje ukuba sibe nemilinganiselo, siqhubeka nokuguqula isisombululo, esiqhelekileyo kwaye into echanekileyo iya kuba malunga ne-300 dpi. Siqinisekisa ukuba imvelaphi ye-artboard yethu imhlophe kwaye siqhubele phambili kwisinyathelo sesibini.
Inyathelo 2: Qalisa ukuzoba
Nje ukuba itafile yethu ilungile, siqhubeka nokuzama iibhrashi esizinikwa sisixhobo. Ukwenza oku, kuyacetyiswa ukuba usebenzise ipensile engekho ngqindilili okanye encinci kakhulu, i-17mm nib iya kuba yinto efanelekileyo ukuqala ngayo, ukongeza, kuya kuba nomdla ukusebenzisa umbala ofudumeleyo owubala kakuhle njenge-template yokuqala, umzekelo i-orenji okanye ebomvu.
Ngaphambi kokuzoba, siya kudala umaleko esiya kuthi ngawo sivelise imivumbo yokuqala esiyenzayo. Into enomdla kukuba imivimbo ayinzima kakhulu, kodwa inobungakanani obuqhelekileyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka wenze uphononongo lokuqala lwebrashi nganye ebonisiweyo.
Nje ukuba sele sihlolisise itemplate yethu ngombala omnyama. Siza kuqhubela phambili ukuphelisa umaleko oye wahlala ngaphantsi komnyama, oko kukuthi, i-orange okanye ebomvu eye yasebenza njengomkhondo. Ukwenza oku, siya nqakraza kwi icon yamehlo eboniswe ngqo kumaleko apho sisebenze khona kwitemplate.
Inyathelo 3: Zisa i-emoji yakho ebomini kunye nombala
Umthombo: Iingcebiso zokupeyinta iiklip
Nje ukuba sinemilo ye-emoji yethu, siqhubela phambili ekunikeni ubomi kunye nemibala. Ukwenza oku, kuya kufuneka ufumane olunye uhlobo lwebrashi, ngeli xesha ngemivumbo engqingqwa ukuze ukwazi ukugcwalisa ipeyinti nganye. Ukuba ufuna ukufumana i-inki ekhethekileyo, ungasebenzisa isixhobo se-eyedropper, Ngesi sixhobo uya kuba nakho ukuthatha iprofayile yombala oyifunayo kwaye ngokucofa umaleko, uya kuba ugcwalise indawo ye-emoji oyithanda kakhulu.
Inyathelo lesi-4: Yenza uchuku lokugqibela
Nje ukuba silungiselele i-emoji yethu, siyaqhubeka nokulungelelanisa ukuba ukukhanya kunye nokuchasana kuya kuba yintoni, ukuze ngale ndlela, ibe yinyani ngakumbi. Ukwenza oku, siya kudala umaleko omtsha kunye siyakubeka ukhetho lokuphindaphinda, xa sele sihlengahlengise umaleko, kufuneka sisebenzise umbala omhlophe kwindawo ye-emoji yethu apho sifuna ukufumana ukukhanya ngakumbi kunakwezinye iindawo.
Yenza oku kaninzi njengoko ufuna ukufaka ukukhanya okungaphezulu okanye ukukhanya okuncinci kwaye wenze okufanayo kwizithunzi, yinkqubo efanayo.
Inyathelo 5: Thumela i-emoji yakho
Xa sele silungile i-emoji, into yokuqala esiya kuyenza kukugcina ukuze ungaphulukani nantoni na kwinkqubo. Kule nto siza kuya kukhetho lwe lovimba Siza kunika gcina njenge. Eyona nto ilungileyo kwaye ikhuselekileyo kukugcina ifayile kabini, kanye kunye nokwandiswa kweprogram ukukwazi ukuguqula i-emoji nanini na xa ufuna, kunye nenye kunye nolwandiso kwi-PNG ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Nje ukuba sicofe ukuthunyelwa ngaphandle, kuya kusithumela kwakhona kwifestile apho kuya kufuneka siqwalasele ubungakanani bemveliso, eyona ilungileyo ubukhulu be 112 x 112 px. Nje ukuba sibe nemilinganiselo yemveliso kunye nokwandiswa, siya kuyigcina kwifolda esiya kuyenza kwi-desktop yethu, ukuze ingalahleki phakathi kobuninzi beefayile zethu ezingabalulekanga.
Icandelo 6: Yifake kwiTwitch
Umthombo: Twitch nceda
Ukulayisha i-emoji kwiTwitch ilula kakhulu, kufuneka siye eqongeni kwaye sivule ipaneli yomdali eyaziwa ngokuba umlawuli womlambo. Nje ukuba ivulwe, siza kuya kumphathi wojelo ukhetho olukwabonisiwe xa luboniswa, emva koko siya kuya ukhetho kwaye emva koko uye ku ubudlelwane. Siza kucofa ukhetho iimvakalelo kwaye kuya kufuneka silayishe kuphela iifayile zethu kwifomathi yePNG. Nje ukuba zifakwe, inkqubo ngokwayo iya kuzifunda kwaye izamkele ukuba zichanekile.
Njengoko ukwazile ukuqinisekisa, ukuyila i-emoji kwaye uyilayishe eqongeni kulula kakhulu. Ngesi sixhobo unokufumana iindlela ezahlukeneyo zokwenza i-emojis yakho. Kwakhona qaphela ukuba ungazami ezinye iibrashi zakhe, kuba zinomdla kakhulu, umphumo wokugqibela awukholeleki. Ungayila i-emojis kuzo zonke iimilo ezinokwenzeka kunye nemibala enokwenzeka, ukongeza, kunye ne-hashtag #twitchemotes uya kuba nokufikelela kumawakawaka e-emojis onokuthi ngayo ukhuthaze uyilo lwakho kwaye uvumele ubuchule bakho buqhubele phambili.
Sele sibonile ukuba iTwitch liqonga elothusa abasebenzisi bayo yonke imihla. Kuqhelekile ukubona ukusasaza iividiyo kwiTwitch kwamanye amaqonga anje ngeYouTube. Kwaye kukuba abasebenzisi abaninzi nangakumbi bathatha isigqibo sokujoyina kwaye baqale uhambo lwabo kwitshaneli ethile yesi sicelo.
Siyathemba ukuba isifundo sibe luncedo olukhulu kuwe ukuqala uyilo lwakho lokuqala lwe-emoji. Ngoku lithuba lakho lokuba ligcisa lenyanga kwaye ngale ndlela, projekthi zonke izakhono zakho zobugcisa.
Ukuyila i-emojis akuzange kube lula kangako.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Uzenza njani ii-emoticons kwi-Twitch